NOOC DHEXDHEXAAD AH EE JEERIGA AH EE SII KORDHAYA BEERTA - CHERRY
Cheeriyada: sharaxaad iyo sawir ah noocyada Bisaylkiisa dhexdhexaad ah
Si aad u beertid beerta cherrytaas oo sannad walba ku farxi doonto dalagyo badan, waxaad u baahan tahay inaad qaadato talaabo masuuliyad ah oo ku saabsan doorashada. Oo waa inaadan bilaabin inaad raadiso macluumaad ku saabsan sida weyn iyo macaan miro geedkii aad jeceshahay, laakiin inaad fiiro gaar ah u yeelato calaamadaha noocan ah sida iska caabinta barafka, u nugulaanta cudurada iyo dulin, xasilooni iyo muddeynta. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad go'aansato noocyada kala duwan ee ku habboon beerashada aagga cimilada.Doodaha Cherry waxaa loo kala qaybiyaa saddex nooc sida ku cad heerka bisilka: Bisaylkiisa hore, Baaskiil dhexdhexaad ah goor dambe Noocyada Hore ee miro dhammaadka Juunyo. Jerriga muddada dhexe dhexdiid ah qaybta labaad ee July - horraantii Agoosto. Goosashada dhammaadka bisha Agoosto - horraantii Sebtembar.
Waa muhiim! Shuruudaha jelida miraha ah waxay ku kala duwanaan kartaa dhowr asbuuc gudahood iyadoo ku xiran gobolka ay koraan.
Maqaalkani waxaa ku jira sharaxaad of noocyada ugu caansan ee jeeriga ee dhexdhexaad ah iyo bartam-Bisaylkiisa.
Si aad u ogaato john Minx ah, aan u sheegno sharaxaadda dhadhanka miraha iyo sifooyinka kala duwan ee geedka. Kala duwanaansho Minx ayaa soo jiidata dareenka sababtoo ah soo jiidashada dibadda ee berry - waxay aad u ballaaran yihiin (5-6 g), guduud mugdi ah, ku dhowaad madow midabka. Dhadhanka miro waa macaan iyo dhanaan, sida ku cad miisaanka macmacaanka waxaa lagu qiyaasay 4.5 dhibcood.
Waa muhiim! Mid ka mid ah astaamaha qiimaha kala duwan ee jeeriga waa dhadhanka berry, taas oo lagu qiimeeyo miisaanka shan-dhibcood. Qiimeyntan waxaa ka mid ah falanqaynta ka kooban halbeegga biomoolka, carafka, qaabka qashinka, dhumucda maqaarka, joogitaanka pubescence ee dusha miro.
The Pusher of Minx waa casaan mugdi ah, aad u casiir leh. Miraha waxay u bislaadaan qeybta labaad ee bisha Luulyo. Midhaha ugu horreysa waxay ku dhacdaa sannadka afraad ee geedka. Hal qof oo qaangaar ah oo qaangaar ah ayaa keeni kara 40 kg sanadkii. Geedku wuxuu leeyahay mid aad u xoog badan, oo la aqoonsan karo oo la isku dhejiyey, oo taajajinaya. Cherry this waa self-infertile, sidoo kale pollinated by Chernokorka iyo Vinka, iyo sidoo kale jeeriga. Kala duwanaanta maadada cherry waa mid qiimo leh sababta oo ah caabarkiisa sare ee heerkulka hooseeya iyo cudurada.
Ma taqaanaa? Kala duwan ayaa u muuqday natiijada ka soo wareegtay Samsonovka iyo Kievskaya-19 jeeriga ee 1966.
Nochka waa hybrid of jeeriga macaan Valery Chkalov iyo jeeriga Star Star. Iyadoo ay sabab u tahay dhexdhexaadinta, waxaa suurtagal ahayd in lagu gaaro faa'iidooyinka noocaan ah ee noocyada kala duwan: waaweyn, casiir leh, midho dhadhan fiican leh; caabbinta barafka sare ee geedka iyo iska-caabbinta kookaha. Geedka dhererkiisu dheer yahay. Fruiting wuxuu bilowdaa goor hore - da'da saddex jir, afar, hore. Sannad saddexaad ee bisha June, waxay bixisaa miraha casaanka ah ee madow miisaankoodu yahay ilaa 7 g.
Tayada macmacaanka ah ee berry waa mid aad u fiican, heerka qiimeynta ugu sarreeya waxay heleen 0,1 dhibcood. Isticmaal cusub oo loo isticmaalo processing. Cherry Nochka samoplodna, waxay u baahan tahay beeritaanka deriska ah ee kale noocyo of jeeriga. Cherry Sweet polluted si liidata.
Miraha Chernokorki waa mid aad u soo jiidasho leh muuqaal - weyn (4.5-5 g), casaan mugdi ah, casiir leh, dhadhan macaan iyo dhanaan leh leh hooska tartanka. Marka la eego qiyaasta macmacaanka, miraha waxaa la calaamadeeyay 3.5 dhibcood. Ku haboon tahay in la isticmaalo qaab cusub oo loo shaqeeynaayo - samaynta macaanka, macmacaanka, jajabka, casiirka. Kala duwan ayaa si fudud u dulqaadanaysa abaaro iyo dhaxan (adkaynta jiilaalka ayaa ka sarreeya celceliska). Dhirta Chernokorki waa mid dhexdhexaad ah, oo leh taaj la isku qurxiyo. In dhalid goor hore - sano ee saddexaad ama afaraad ee nolosha. Ereyga ah Bisaylkiisa buuxa ee berry waa tobanka sano ee labaad ee June. Gaaraa wax soo saarka 25-30 kg oo ka mid ah geed.
Ma taqaanaa? Jardiinooyinka halka geedka ay ka soo baxaan, Chernokorka waxay soo saari kartaa ilaa 50 kg oo ka mid ah geed.
Kala duwanaanta noocaas ah waa samobesploden. Waxyaabaha ka weyn ee Chernokorki waxaa lagu gaari karaa by beerashada Donchanka, Ugolyok, Aelita, Yaroslavna beerta isku mid ah iyada la. Waxay leedahay iska caabin ah dhexdhexaad ah cudurada. Badanaa waxyeelo ay soo gaartey cocomycosis.
Cherry Toy waa hybrid ah jeeriga iyo jeeriga. Waxyaabaha loogu talagalay isgoysku wuxuu ahaa cherry macaan oo qoyan Sunny iyo cherry Lyubskaya. Qaadashada noocaan kala duwan, jilciyayaashu waxay ku guuleysteen in ay gaaraan waxsoosaar sarreysa - illaa 45 kg oo ka mid ah geed iyo miro aad u ballaaran - miisaanka celceliska 8.5 g. Ugu badnaan miraha, oo laga diiwaangeliyey hal cherry ah oo kala duwan, waa 75 kg. Faa'iidada kale ee Toy wuxuu yahay in uu galo fruiting, oo gaaraya da'da saddexda ah.
Miraha of Cherry Toy waa casaan mug leh maqaarka khafiif ah iyo hilib casiir leh, iyo dhadhan macaan-dhanaan waa in lagu daro si ay sharaxaad. Waxay leeyihiin dhibco sarreeya - 4.5 dhibcood. Tilmaamahan waxaa ka mid ah Cherryies Toy universal, oo loo isticmaalo cusub iyo falanqaynta.
Miro Cherry this dhamaadka June. Ka dib markii beerto waxay bilaabmeysaa inay midho u dhalato saddex sano kadib. Geedka waa abaar u adkaysta iyo dhaxan u adkaysta (u adkee qabow illaa -25 ° C). Cudurku wuxuu leeyahay heerka celcelis ahaan u nugulaanta. Waxay tilmaamaysaa geedka samoplodny. Wax soo saarka wanaagsan ee Nochka waxaa la helaa haddii deriskeeda beerta ay yihiin Cherries Valery Chkalov, Franz Joseph, Krupnoplodnaya, Samsonovka Cherries, Minx.
Erdi Betermo ayaa iska leh noocyo of Bisayl dhexdhexaad ah dhexdhexaad ah. Caleemaha Hungarian. Miraha waxaa la ururin karaa qeybta hore ee bisha Luuliyo. Miro Cherry this beruud weyn (5.5-6.6 g), kuwaas oo leh sifooyinka sare dhadhanka (4.7 dhibcood) iyo ujeedada guud.
Kala duwan ayaa leh faa'iidooyin badan:
oo lagu garto dhalidda sare iyo mid deggan;
waxay u adkeeysataa dhaxan daran;
adkaysi u leh astrosis,
dhexdhexaad u ah cocomycosis.
Erdi Betermo waa cherry-self-fruited. Noocyada ugu fiican ee pollinators cherry waa Uyfeherthy Fyurtosh, Turgenevka.
Cherry Podbelskaya waa geed baadiyaha ah (ilaa 5 m). Taajirkiisu waa mid qaro weyn, oo wareegsan. Miraha miro waaweyn oo culeyskiisu yahay 6 g, maroon. Si aad u dhadasho berry waa mid casiir leh, macaan iyo dhanaan. Wixii tayadeedeeda iyada waxay heshay dhibcaha ugu sareeya - 5. Beerta cherry Podbelskaya waa mid caalami ah - waxaa loo isticmaalaa cusub, loo isticmaalo in lagu sameeyo macmacaanka.
Xilliga Biyaha ayaa ah tobanka sano ee hore ee bisha Luuliyo. Xilliga xagaaga, hal geedka wuxuu gaari karaa dhalidda 13 kg. Faa'iidooyinka noocaan ah waxaa ka mid ah dareenka xagga barafka - gobollada waqooyi waxa ay waxyeeleeyeen gubashada iyo qaboojiyaha. Cuduradaasi waxay ku dhici karaan cocomycosis, waxay leedahay celcelis ahaan iska caabida cudurkan. Marmar dhif ah ayuu ku dhacay chlorosis kaneecada.
Podbelskaya - cherry samobesplodnaya, waxay u baahan tahay beeritaanka u dhow noocyo kale ee pollinators. Tani, johannesört iyo noocyo noocan oo kale ah jeeriga sida Ingiriisiga, Lot, Small Duke waa ku habboon yihiin.
Giriiga Vavilov ayaa sidoo kale iska leh geedka dhexe. Dalaggu wuxuu keenaa tobanka sano ee tobnaad ee July dabiiciga cas cas ee dhexdhexaad ah (4-4.5 g). Tayada dhadhanka wanaagsan ee miraha waxaa lagu qiyaasaa 4.2 dhibcood. Geedaha waxay leeyihiin hanti si ay u koraan dhererka. Taajashadooda waxay u egtahay ballaaran oo ah dhexdhexaad ah, dhexdhexaad ah. Cherry yimaado fruiting afar sano ka dib markii laga beerto. Waxtarkiisu waa wanaagsan yahay. Xusuusta kala duwan ee xasuusta Vavilov waxay u egtahay in uu barafku istaago, waana mid aan saameyn ku laheyn cocomycosis.
Cuntada wanaagsan waxaa lagu gartaa noocyo kale oo Bisayl dhexdhexaad ah - Kalsooni. Xilli xilli ka mid ah 10 sano jir cherry ah kala duwan, waxaad qaadan kartaa celcelis ahaan 31 kg. Kalsoonidu waxay timaaddaa miro marka geedku yahay afar sano. Goosashada buuxda ee jeeriga ayaa la soo ururin karaa dhammaadka Juun. Kala duwanaanta noocaan ah waxay keenaysaa miro waaweyn - 6.5-7 g. Waxay leeyihiin midab madow oo soo jiidasho leh. Gudaha gudahood waa muraayad fudud. Markaad wada baabbi'isay, leh dhadhan macaan-dhanaan leh.
Dhadhanka miro cusub oo miisaankiisu sarreeyo waxay gaareen 4.6 dhibcood. Ujeedadoodu waa mid caalami ah. Cherry Solidarity waxaa lagu kala saaraa dhalidda sare iyo iska caabbinta cudurada.
Noocyada kala duwan ee Nord Star waxay jecel yihiin milkiilayaashooda iyaga oo yar yar, balse waa mid aad u casiir leh oo miro leh oo soo daata tobanka sano ee labaad ee bisha Luulyo. Miraha waa casaan mugdi ah, miisaankoodu yahay 4-4.5 g. Dhibcahooda dhadhankiisu waa 4 dhibcood. Maaddaama aysidhka xad dhaafka ah, waxaa badanaa loogu talagalay farsamada, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaalaa cusub. Dhirta kala duwan ee noocan ahi waxay bilaabaan inay midho hore u soo baxaan - sanadaha labaad ama sannadka saddexaad ka dib marka la beerto. North Star waa jiilaal aad u adag-adag - heerkul ah -32 ° C, 57% kelyaha ayaa ka badbaaday. Waxaa lagu gartaa iska caabin aad u sareeya oo loo yaqaan 'cocomycosis' iyo 'nodule'. Giriigyadaasi waxay qayb ahaan ka mid yihiin is-bacriminta. Wax soo saarkooda waxay kordhinayaan marka la beero xaafadda Nefris, Meteor, Oblachinskaya.
Sharaxaad ka mid ah noocyada celceliska celceliska celceliska muddada celceliska ayaa noqon doona mid aan dhammeystirnayn iyada oo aan fasalka Alpha. Tani waa noocyo kala duwan oo cusub oo la bakhtiiyo by jilayaal Yukreeniyaan at Machadka Mlievsky ee dhirta dhirta. L.P. Simirenko. Miraha dhadhanka macaan ee u bislaaday horaantii July. Gorfaha Alpha waa mugdi madow, dhexdhexaad ah miisaanka (4.5 g). Marka la falanqeynayo dhadhanka, waxaa lagu qiimeeyay 4.9 dhibcood. Cuntada waa la cunaa, waxaana loo adeegsadaa samaynta jajabka, casiirka, liinta. Kala duwanaantan waxaa lagu gartaa hufnaanta wanaagsan, dhalidda sare iyo mid deggan, iska-caabbinta cocomycosis, moniliosis iyo dhaxan. A geed sideed jir ah caleen 15-16 kg ee jeeriga.
Waxaan soo bandhignay liis ah oo ah midhaha dhexe ee Bisaylkiisa, noocyada ugu fiican ee kaas oo buuxiya shuruudaha ugu casrisan ee beeralayda, beerta iyo macaamiisha. Waa noocyadaas, waxaan kugula talineynaa in aad dareenka bixisid markaad beerto beertaada.